အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ငရဲပန်းတို့ရဲ့ အလယ်မှာ
35 Responses to “ငရဲပန်းတို့ရဲ့ အလယ်မှာ”
မချောရေ .. ဘိန်းပန်းဆို တာ အင်မတန် လှတယ် လို့ ငယ် ငယ် က ထည်း က ကြား ဘူးတယ်.. အ ခု မှ မချော ဓါတ် ပုံ ထဲ မှာ တွေ့ဘူးတယ်.. ကိုယ် တိုင် အဲဒီ လိုမျိုး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်တာ. ဘိန်းခင်း အလည် က မချော လို မိန်းမလှ လေး တယောက် အတွက် အန္တာရယ် များလွန်းတယ်ထင်တယ်။
လူငယ်တွေ အား လုံး မူးရစ်ဆေး ဒါဏ် မှ ကင်းဝေး ကြ ပါစေ။
ဓါတ်ပုံတွေ တော် တော် ကောင်းတယ်.. ရန် ကုန် က MAGAZINE တိုက် တွေ က မချော ပုံတွေ ယူ သုံး အုံး မှာ မြင်နေ သေးတယ်။
အောင်မြင်မူု တွေ အများ ကြီး ရ ပါစေ..
တကယ့်ကို ရှားပါးတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုပါ။
မချောပြောသလို ဘိန်းစိုက်တဲ့တောသူတောင်သားတွေကို ပညာပေးအစီအစဉ်မျိုးဖြစ်မြောက်နိုင်ပါစေ ဆုတောင်းမိတယ်။
တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါးပိုစ့်အတွက် မချောရဲ့အားထုတ်မှုအတွက် Bravo!
ပုံလေးတွေ လှတယ်.. အောက်ဆုံးပုံလေးသဘောအကျဆုံးပါ..
ချောရေ ... ဘိန်းချက်တာကို ဘိန်းစေ့က ချက်တယ်လို့ပဲ ထင်နေတာ။ အသီးကို အဲဒီလို ခြစ်ရတာ သိဘူးရယ်။ အိမ်မှာ ပေါ်ပီတွေပွင့်ရင် ခြစ်ကြည့်အုံးမယ်။
ချော အခုလို အသေးစိတ် ပုံတွေနဲ့တကွ ရှင်းပြတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ပြီးတော့ ချောပြောသလို ဘိန်းစိုက်နေတဲ့သူတွေကို ဘိန်းအကြောင်း နားလည်ဖို့ ပညာပေး အစီအစဉ်က တကယ်ကို ကျယ်ကျုယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘိန်းအစားထိုး တခြားသီးနှံစိုက်ဖို့ သူတို့ကို သိမ်းသွင်း ဆွဲဆောင်ရမယ်။ အမှန်တကယ် သီလစောင့်ရင် အူမ တောင့်တယ်ဆိုတာလဲ သူတို့ကို နားလည်စေချင်တယ်။
သိပ်အဖိုးတန်တဲ့ post ပါ မမ။ စာရေးသူတစ်ဦးရဲ့ စေတနာ၊ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ အကောင်းဆုံး စာလေးပါ။
အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ စာရေးသူရဲ့ စေတနာ နဲ့ အားထုတ်မှု့ ကိုအထင်းသား မြင်ရတယ်။ ပုံတွေက တော့ Value Added လို့ဆိုရမလားပဲ။
ဘိန်းပန်းတွေက သိပ်ကိုလှတယ်နော်.. ကျူလစ်တွေလိုပဲ... လှသလောက် ကြောက်စရာလည်း ကောင်းလှပါလား... ဗဟုသုတတော့ အတော်ကိုရပါတယ်... ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တော့ အတော်ကို ချီးကျူးမိပါတယ်.. မချောရေ.....
ဘိန်းပန်းတွေလှတယ်ဆိုတာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ဖူးတယ်..ဘိန်စေးထုတ်ယူတာကိုတော့ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ အဆင့်ဆင့် မြင်ရတာ မချောရေ ကျေးဇူး..မချောရဲ့အပင်ပန်းခံအားထုတ်မှုကို တကယ် ချီးကျူးတယ်..Well done !
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဘူးလို့ ပဲပြောပါရစေတော့...
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် အမေသော ဘာသောမသိဘဲ
ဒါဟာလူသားကို လူစိတ်ကင်းလွတ်အောင် ပြုလုပ်နေသလိုပါပဲ။
အမချောရဲ့အားထုတ်မှုကို ရင်တုန်မောပန်းစွာနဲ့ 
မသ်ိနားမလည်တဲ့၊ ရိုးသားတဲ့ ဘ၀တွေကို ခုတုံးလုပ် ခြေကုတ်ယူလို့ ၀ိသမလောဘသမားတွေရဲ့ ကြံရက်ပုံက ငရဲပန်းကို ငရဲပန်းမှန်းမသိ၊ လွယ်လွယ်နဲ့ ငွေတွေ ရနေတဲ့အပေါ်၊ ဒီဘိန်းတွေ မှီဝဲပြီး ဘ၀ပေါင်း ဘယ်လောက်များတောင် ပျက်စီးခဲ့ကြရပြီလဲ မသိ။ ဒီလို နေရာတွေအထိ ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးဖို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပညာပေးဖို့ လိုနေပြီ..ချောရေ...။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ဘရာဗိုလုပ်ပါရစေ....။
အစ်မချောရေ..ပို့စ်လေးကောင်းလိုက်တာလို့ မပြောတော့ပါဘူး။ တုပ်တုပ်တောင်မလှုပ်မိဘဲ ဖတ်သွားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်မလည်း ဘိန်းစိုက်မလားမေးရင် မစိုက်ပါဘူး။ စိုက်တဲ့သူရှိနှင့်ပြီးမှပဲ။ သူတို့စိုက်တာနဲ့တင် အလွဲသုံးစားလုပ်မယ့်သူတွေအတွက် လုံလောက်ခြင်းထက်မက လုံလောက်နေပါပြီး(
ပုံနဲ့တကွ ဗဟုသုတအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မရေ။
Thank you very much for your researching , writing and posting.
စိတ်ရှည်လက်ရှည် သွားရောက် မေးမြန်း ရိုက်ကူးပြီး ပိုစ့်လေးခုလိုရေးပေးတဲ့အတွက် တကယ် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဘယ်အရာမှာ မဆို သုံးတတ်ရင် ဆေး၊ မသုံးတတ်ရင်ဘေးဆိုတော့လည်း အခက်သား။ ဆေးဝါးအဖြစ်သုံးဖို့ လိုအပ်သလောက်ပဲ စိုက်ကြရင် ကောင်းမယ်နော်....။ လူတွေ အညွန့်တုံးပြီးမှ ရမဲ့ဝင်ငွေကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး၊ မစိုက်ချင်ပါဘူး ချောရယ်။ အင်း သူတို့တွေ ဘိန်းစိုက်နေကြပြီး ဘိန်းရဲ့ အန္တာရာယ်ကို မသိလို့တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ပြောရခက်ပါတယ်လေ....
ဘိန်းဆို ချက်တယ်ပဲ သိထားတော့ ခုလိုပုံလေးတွေနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြပေးတဲ့ ချောကို ကျေးဇူးတင်တယ်နော် ။
စေတနာကြီးပါလေ့ မချောရေ။။။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ် ၆နှစ်လောက်က ကယားနဲ့ရှမ်းနယ်စပ်က ဘိန်းခင်းတစ်ခုကို မမြင်ဘူးလို့သွားကြည့်ဖူးတယ်။ သဘောတရားလောက်သာရှင်းပြပြီးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ခါးခါးသီးသီးငြင်းပါတယ်။ ကြာကြာနေစေချင်တဲ့ပုံမရှိသလို ခေါ်လာတဲ့လူမျက်နှာတောင်မထောက်ပါဘူး။ ချက်ချင်းကိုပြန်ခိုင်းပါတယ်။ မြင်သာမြင်ခဲ့တယ် ဘာမှန်းကိုမသိခဲ့ပါ။ အဲဒီကိုခေါ်လာတဲ့လူကိုမေးတော့လည်း ပါစပ်ပြောရယ် တိုင်းရင်းသားစကားဝဲတာကြောင့်ဆိုလိုရင်းကဘာမှန်းကိုမသိခဲ့ပါ။ အခုမှသာသေချာသိပြီး သေချာမြင်ဖူးတော့တယ်။ ကျေးဇူး မချော။
အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့စကားကလည်း ရှိလေတော့ ဘိန်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိပင်သိသော်ငြား၊ နားပင် လည်သော်ငြားလည်း စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့၊ သားရေးသမီးရေး၊ မိသားစုဝမ်းစာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ချမ်းသာရေး၊ ဘဝရဲ့အရေး၊ အရေး ကိစ္စ အထွေထွေတို့အတွက် မစိုက်မဖြစ်လို့ စိုက်ပျိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေမျိုး အပေါ်က အမေအိုတို့လို ဘိန်းစိုက်တဲ့ တောသူတောင်သားတွေက တစ်ကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီပြဿနာတွေ အတွက်ကို ကျန်တဲ့ ကျွန်မတို့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းဖို့ ကူညီပေးနိုင်မလဲ၊ ဘာတွေ သူတို့အတွက် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်မလဲ yeah That's the point . We should not only think to tell them to stop but give them the substitution which can solve their needs .
ပညာပေးလုပ်ငန်းဆိုတာပညာပေးရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ လိုအပ်တာတွေကိုအစားထုိုးဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်ရမယ်။
မချောရေ ဒီပို့စ်လေးကနေ မသိသေးတာတွေ သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
မချောရေ- ဗဟုသုတလေးတွေရအောင် အခုလိုမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘိန်းပန်းကလှတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် ဘိန်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရ၊ ဘ၀ပျက်ရ၊ အသက်ဆုံးရတဲ့ လူတွေရဲ့ အရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေပါတယ်။ အသိပညာနည်းပါးတယ် တောင်သူတွေကို သနားသလို စိုက်ခင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး ကြက်သီးများတောင် ထမိပါတယ်။
မချောရေ ခရီးလည်းသွားရင်း တဂ်ပို့စ်လေးဖြေပေးပါဦးခင်ဗျး)
ဒီပိုစ့်လေးမှာ မချောရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ စေတနာကို ပီပီပြင်ပြင် မြင်တွေ့ ခဲ့ရတယ်... တကယ် ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ ပိုစ့်လေး တစ်ပုဒ်ပါ... ခုလိုပင်ပန်းခံပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လေ့လာပြီး ပြန်ဝေမျှပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါ မချော...
ဖတ်သွားပါတယ်၊ တန်ဘိုးရှိသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါပဲ၊
ဒီလို ခြံရှင် မိသားစုမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီးဖြစ်မှာပါ၊
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ထဲကို ပို့တဲ့ တစ်ဘက်နိုင်ငံများက သူတွေကတော့ ပေါ့လို့ ကျော့လို့
………………………. လက်ညှိးထိုးရင်တော့ ဒီနိုင်ငံကိုပဲ။
မချော ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတော့ တစ်ကယ်ပဲ လေးစားအားကျမိတယ်။
ဒီပို့(စ်)လေး ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ခံစားမိတာကတော့လေ.
တစ်ကယ်တမ်းသဘာဝကပေးတဲ့ ဘိန်းပန်းလေးတွေက အရမ်းကိုဖြူစင်ပြီးလှကြတယ်
ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့ အသုံးချအရောင်ဆိုးမှုအောက်မှာ ငရဲပန်းဆိုတဲ့ နာမည်တွင်သွားစေတယ်လို့
အတွေးရဲတယ်၊ ရေးရဲတယ်လို့ အရင်ပြောပါရစေ။ တရားဝင်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ဒီလိုပို့စ်မျိုးကိုတင်ရင် အနည်းနဲ့အများ တာဝန်တော်တော်ကြီးပါတယ်။ မချောတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလို့ ပြောရမလားဘဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတတော့ တော်တော်လေးရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးတဲ့ ဘိန်းပန်းလေးတွေက လှလိုက်တာဆိုတာကို ခုမှတကယ်လက်ခံမိတော့တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ သိလို့လုပ်လုပ်၊ မသိလို့လုပ်လုပ် သူတို့အနာဂတ်အတွက်တော့ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘာများတတ်နိုင်မှာလဲ။
ဘိန်းပန်းတွေက ဘိန်းတွေလိုပဲ လူကို မူးယစ်ရီဝေသွားလောက်အောင် လှတယ်နော်။း)
မမရေ... အပင်ပန်းခံပြီး ဗဟုသုအများကြီးတိုးအောင် လုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်..........
ဗဟုသုတတွေဖတ်သွားရုံသာမက အောက်က အစ်မရဲ့ သဘောထားကိုပါ လေးစားစွာ ဖတ်သွားပါတယ်အစ်မ..
တစ်ကယ့်အနှစ်သာရ ရှီတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုပါအမရေ
လောကကြီးမှာ ဘယ်လောက်လှတဲ့ ပန်း
တွေပဲ ဖြစ်ပါစေ “ ဂျူ ” လေးတို့လို ချစ်စရာ့
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အလှအပကို
တော့ မှီနိုင်မယ် မထင်တော့ဘူးလေ.........
အားလုံးပဲ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ နိုင်ကြစေ
( ဦး )